Gịnị bụ WiFi ntupu? Uru na ọghọm | Akụkọ akụrụngwa
Gịnị bụ WiFi ntupu? Uru na ọghọm ya
Anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ejikọrọ na netwọk WiFi nke ụlọ anyị, PC ma ọ bụ laptọọpụ anyị, ama anyị, mbadamba ụrọ, elele anya gị, telivishọn anyị, bọlbụ ndị mara mma, kamera onyunyo, ndị ọkà okwu na a ogologo ndepụta nke ngwaọrụ anyị jikọọ na netwọk ụlọ anyị na a rawụta na ọtụtụ mgbe anaghị tụrụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ngwaọrụ ndị a na-ejikọ ndị ọrụ a ka ndị ọrụ "na-enye" ​​na anyị ekwuolarịrị site na mbido isiokwu ahụ na ha abụghị ezigbo ndị na-agagharị agagharị ọ bụla.
Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọrụ ji ejedebe ịhọrọ ndị na-emegharị ntanetị iji gbasaa mgbaàmà ahụ n'ụlọ niile na nke a dị mma na ihe ọjọọ, ebe ọ bụ na PLC ndị a na-ahụkarị abụghị ihe ngwọta nke njikọ a ma ọ bụ nsogbu mgbaàmà dị ala na ngwaọrụ anyị, a na-elekwasị anya na ngwọta ahụ ozugbo. WiFi Mesh netwọk ma ọ bụ netwọk mesh.
Linksys WHW0303B Velop tri-gbalaga Wi-Fi ntupu usoro
Mana tupu anyị abanye n'okwu ahụ, anyị ga-ahụ isi ihe nke ụdị ntupu ma ọ bụ netwọkụ mesh WiFi nke dị ugbu a n'etiti ndị ọrụ. Ọ dị mkpa ịsị na site na ngwaọrụ ndị a, ha ka bụ ndị na-akwado rawụta yana ụfọdụ satịlaịtị ndị dị na ebe dị mma nke ụlọ, ọfịs ma ọ bụ ebe ịchọrọ ịgbasa mkpuchi ma nye nkwughachi nke netwoki WiFi. Ya mere, inwe ụlọ ejikọtara pụtara ịnwe mkpuchi WiFi dị mma yana ụdị ngwaọrụ nwere ike ịdị mma maka ya.
1 Gịnị bụ usoro ntanetị?
2 Etu esi etinye satellites na mmadụ ole itinye
3 Uru nke ụdị mkpuchi WiFi Mesh
4 Isi ọghọm nke netwọkụ ntupu
5 Nhọrọ nke ndị na-agagharị agagharị ga-adabere n'ọtụtụ ihe
Gịnị bụ usoro ntanetị?
O doro anya na anyị na-eche ihu ụdị njikọ dị nnọọ mma karị, dị ike ma dị mma karịa mgbe anyị wụnye PLC na plọg nke ụlọ anyị. N'okwu a, ihe anyị nwere ike ikwu maka netwọkụ ntupu bụ na ọ gbasara a usoro nke «router» na-akpọ Satellites nke na-agbatị mgbaàmà ahụ karịa ekele maka netwọkụ izizi n'onwe ya, bouncing mgbaàmà a n'ụzọ ụfọdụ na-eme ka o kwe omume ịtinye netwọk nke isi rawụta anyị ebe ọ bụla n'ụlọ anyị.
Ọ gụnyere ijikọ ndị ọrụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na nke anyị, ọdụ ọdụ etiti nwere ọtụtụ satịlaịtị ndị na-eme ka anyị nwee mkpuchi na enweghị mfu n'ụlọ anyị ọ bụla. Ejikọtara ihe a niile, ya bụ, ọ bụrụ na anyị nwere satịlaịtị abụọ ejikọrọ na rawụta anyị ihe ndị otu a na-eme bụ "ịgwa ibe ha okwu" iji nye akara ngosi kachasị mma na ngwaọrụ anyị ejikọrọ na n'ụzọ dị otú a obere ma ọ bụ enweghị mgbaàmà efunahụ site na rawụta etiti.
Ihe niile ejikọtara na ibe anyị ma n'ụzọ dị otú a anyị enweghị nsogbu mgbe anyị na laptọọpụ ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka anyị na-agagharị n'ụlọ, wdg, ebe ọ bụ na akụrụngwa Mesh na-emepụta ntupu nke ruru ebe niile, na-eme ka mkpuchi dị ike ebe ha chọrọ ya n'ezie. Onye Satellites ọ bụla nwere ọrụ maka ikesa netwọk ahụ n'ụzọ ziri ezi nke mere na mgbe anyị na-agagharị Ka anyị ghara inwe nsogbu mkpuchi WiFi.
Nokia WiFi Beacon 3 - Mesh Router Sistemụ
Etu esi etinye satellites na mmadụ ole itinye
Nke a bụ ihe ga-adabere nke ukwuu n'ụlọ anyị, ọfịs ma ọ bụ ebe anyị chọrọ iji ụdị ngwaọrụ a. Eziokwu bu na na-ejikarị satịlaịtị adịkarị karịa iji kpuchie mkpuchi mkpa, ma n'ezie, nke a na-adabere mgbe niile na akụkụ nke ụlọ anyị, osisi o nwere ma ọ bụ ebe anyị nwere isi rawụta na ndị ọzọ na-ekwughachi.
Ọ bụ ya mere o ji adị mma mgbe niile ka onye jiri ụdịrị ngwaọrụ a dụọ gị ọdụ ma ọ bụ dị ka anyị na-ekwu taa: lee vidiyo na YouTube. N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ Mesh n'onwe ha na-enye ntinye dị mfe na ngwa ngwa, ọ dịghị mkpa ịbụ ọkachamara na ya, ụfọdụ Satellites na-enye ọkụ ọkụ ọkụ na ha iji hụ ike mgbaama ahụ ma anyị ga-edebe ha ka ha wee nata ya kachasị, ntụgharị, ebe mgbanwe ma ọ bụ ọbụlagodi nghazi ngwaọrụ ndị a.
Nzọụkwụ nke njikọ maka ndị a rawụta dị mfe:
Anyị na-ejikọta rawụta isi na rawụta nke onye na-eweta ịntanetị anyị
Anyị na-etinye ihe ndị ọzọ Satellites na ebe ndị dị mma ka anyị wee kpuchie kachasị
Anyị na-enweta ngwa ndị nrụpụta site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ site na kọmputa iji hazie ya
Ọ bụghị vidiyo niile anyị hụrụ na ntanetị mmekọrịta YouTube dị mma n’ịkọwa etu ụdị ngwaọrụ ndị a siri arụ ọrụ, anyị ga-amata otu esi amata ọdịiche nke ọma ma jiri ndị nke anyị hụrụ mara n’ezie ihe ha na-ekwu. N'ebe a n'okpuru anyị ga-ahapụrụ gị vidiyo nke ndị ọrụ ibe anyị site na iPhone News na otu n'ime ndị na-agba ọsọ Mesh:
Ubiquiti Amplifi Homelọ ...
Uru nke ụdị mkpuchi WiFi Mesh
Dịka o doro anya, ihe niile nwere uru na ọghọm ya, mana ugbu a anyị ga-ahụ uru ya. N'echiche a, nke kachasị mma bụ na ọ bụrụ na anyị ekesaa Satellites niile ekesara nke ọma, anyị nwere ike kesaa netwọk WiFi n'ụlọ anyị ma ndị otu 2,4 na 5GHz. Ọ dakọtara na WiFi ac yabụ n'echiche a anyị agaghị enwe nsogbu.
Igodo nke ọzọ na netwọkụ ntupu bụ nke ahụ ị nwere ike ugbu a edebe ọnụ ọnụ niile ịchọrọ, ị ga-enwe otu netwọkụ ị ga - ejikọ ebe ọ bụla ị nọ n'ụlọ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na imirikiti ngwaahịa ị ga-ahụ n'ahịa nwere nkọwapụta dị oke mkpa dịka ndakọrịta na WiFi-ac na otu band abụọ (2,4 na 5GHz), na omume ị ga-ahụ naanị otu netwọkụ nke ha niile ga-eme jikọọ kọmputa gị, smartphones, mbadamba, wdg na nke ahụ dị mma, n'ezie ọ dị ezigbo mma.
Ndị na-emepụta na-enye anyị ụlọ ọrụ njikọ maka ngwaọrụ ndị a na obere oge na-enweghị ndị ọkachamara anyị nwere ike ịnwe mkpuchi WiFi zuru ezu n'ụlọ anyị na ihe ka mma, ọ dịghị mgbaàmà ọnwụ N’ebe anyị enweghị mkpuchi na mbụ.
Netgear Orbi RBK23 - ntupu WiFi Sistem
Isi ọghọm nke netwọkụ ntupu
Anyị enweghị ike ikwu na ihe niile bara uru na ụdị ngwaọrụ a, dị anya na ya na ihe mbụ anyị ga - ele anya na - adịghị mma bụ ọnụahịa nke ngwaọrụ Mesh ndị a. Ugbu a anyị na-ahụ ọtụtụ ngwaahịa na ọnụahịa dị iche iche yana agbanyeghị na ọnụahịa ha na-eji nwayọ daa, ha abụghị ngwaahịa dị oke ọnụ ikwu. Ihe mgbochi ọnụahịa ga-adabere n'ọtụtụ ihe na otu n'ime ha bụ ọnụ ọgụgụ Satellites anyị chọrọ iji na nke ọzọ ogo ngwaahịa na akara.
Na mgbakwunye A naghị edozi nsogbu mkpuchi WiFi mgbe niile 100% na ụdị ngwaọrụ a. Ọ bụ eziokwu na n'ọtụtụ oge, ọ ga-arụ ọrụ maka anyị igbo mkpa anyị, mana n'oge ụfọdụ enwere mgbidi siri ike ịgafe, ọtụtụ osisi dị elu, nnyonye anya nke electromagnetic ma ọ bụ ogologo iji kpuchie, akụrụngwa Mesh nwere ike abụghị ezigbo arụmọrụ.
Ọ bụ eziokwu na anyị nwere ọtụtụ ụdị na ụdị dị taa ma enwere ọtụtụ na ndị ọzọ, ndị nrụpụta zuru oke ụzọ dị iche iche maka ụdị ngwaahịa a mana ọ gaghị adabere na mmefu ego anyị na ihe anyị chọrọ itinye ego na ya.
Nhọrọ nke ndị na-agagharị agagharị ga-adabere n'ọtụtụ ihe
Anyị anyi hapu gi dị iche iche ntupu ngwaọrụ ke ibuotikọ ejikọtara ka ị nwee ike ịhụ ụfọdụ nhọrọ wee họrọ nke kachasị amasị gị ma ọ bụ nwee ike ịdị mma maka ikpe gị, o doro anya na ọ ga-adabere n'ọtụtụ ihe na-eburu n'uche mmefu ego na mpaghara anyị kwesịrị ikpuchi.
Ihe doro anya bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ ndị otu a na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma iji nweta mkpuchi na nkuku niile nke ụlọ anyị, ọrụ, wdg. niile na-enweghị adịkwa mgbaàmà ma ọ bụ ike nke uka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Gịnị bụ WiFi ntupu? Uru na ọghọm ya
Huawei MediaPad M6: Nyochaa mbadamba nkume nwere ọtụtụ ihe ikwu
Tronsmart Spunky Beat ekweisi nyocha